Nagu saabsan - Hangzhou Qianrong Qalabaynta Qalabka Co., Ltd.
U hogaansanaanta "diiradda saarida codsiga ultrasonic, niyad wanaag si aad u guuleysato macaamiisha, si aad ugu guuleysato sumcadda tayada" ujeedada horumarinta, noqoshada alaab-qeybiyeha ugu horreeya adduunka ee qaybaha asaasiga ah ee ultrasonic, iyada oo loo marayo heerkeenna xirfadeed iyo dadaallada aan kala go 'lahayn, alaabada tayada leh ee macaamiisha horumarinta warshadaha si loo abuuro soo celin qiimo leh.
Hangzhou Qianrong Qalabaynta Qalabka Co., Ltd. waxay ku hawlan tahay ganacsiga dhoofinta ee transducers ultrasonic iyo Mashiinka alxanka ultrasonic adduunka oo dhan in ka badan 40 dal.
Maaddaama ay tahay dhoofiyaha weyn ee qaybaha ultrasonic ee xirfadleyda ah, Qsonic wuxuu leeyahay khibrad ballaaran oo wax soo saar iyo aqoon sare, sidaa darteed waxaan ku kalsoonahay inaan la kulmi karno baahiyahaaga. Isla mar ahaantaana, alaabooyinkeennu waa kuwo aad macquul ugu ah qiimaha iyo tayada sare, si macaamiishayadu u ilaashan karaan faa'iidada tartanka.
Horumarinta shirkadda, waxaan leenahay koox aad u fiican. Waxaan bixinaa oo keliya alaabooyinka caadiga ah, laakiin sidoo kale alaabooyin si gaar ah loo sameeyay oo ku saleysan sawirro faahfaahsan ama shaybaarro.
QRsonic waxay macaamiisheeda siisaa adeegyo badan oo OEM ah. Astaanta macaamilka waxaa lagu daabacan karaa qalabka wax lagu beddelo iyo qalabka ultrasonic.
Waxaan si kal iyo laab ah u rajeyneynaa fursadda aan kuugu adeegi doono oo aan mustaqbalkaaga ku noqon doono lamaane. Aynu si wada jir ah uga wada shaqeyno sidii loo abuuri lahaa soo noqnoqosho qiimo-badan-qiimo leh xagga horumarinta warshadaha oo leh alaab tayo leh.